बुटवल, ११ भदौ । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गतको कोरोना उपचार विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । उक्त अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितमध्ये कपिलवस्तुका एक पुरुषको मृत्यु भएको करिब १२ घण्टा बित्न नपाउँदै आज बिहान करिब १०ः३० बजे एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमका अनुसार रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–२, जानकीनगरकी करिब ७० वर्षीया महिलाको कोरोना अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो । सो महिलामा थाइराइड र उच्च रक्तचाप समस्या रहेको उनले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उनलाई गत साउन २६ गते कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि होम आइसोलेसनमा राखिएको र स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदै गएपछि साउन ३१ गते कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
उनलाई प्लाज्मा दिनका लागि केही समयअघि कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका कपिलवस्तुका एक युवक आज बिहान बुटवल आइपुगेका थिए । रुपन्देहीमा यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात पुगेको छ ।
यसअघि गए राति करिब ११ बजे कपिलवस्तु जिल्ला, कपिलवस्तु नगरपालिका–१ का ५० वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममै सोही अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
उनको राति स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार थालिए पनि राति नै मृत्यु भएको बताइएको छ । संक्रमितलाई यही भदौ ५ गते संक्रमण पुष्टि भएपछि कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गरिएको थियो । उनलाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मिर्गाैला रोगको समस्या रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. गौतमले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।